युगसम्बाद साप्ताहिक - नेपाली कांग्रेस अब कुन बाटो हिंड्ने - यादब देवकोटा
Wednesday, 04.01.2020, 04:36pm (GMT+5.5) Home Contact
नेपाली कांग्रेस अब कुन बाटो हिंड्ने - यादब देवकोटा
Tuesday, 11.20.2018, 11:43am (GMT+5.5)
मुलुकको सबभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस संक्रमण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले जन्माएको गुटबन्दीका कारण तीनवटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसंग पराजित भयो । अर्थात् कांग्रेसले भोट त पायो तर त्यो भोट अरुलाई उछिन्न काफी भएन । अहिले कांग्रेसभित्र यसैको समीक्षा हुने क्रममा छ– महासमिति बैठक मार्फत ।
कांग्रेस पुरानै अवस्थाबाट चल्ने कि नयाँ धार समात्ने ? अहिलेको जल्दोबल्दो प्रश्न हो यो । हुन त कांग्रेसमा मात्र हैन सबै दलहरुमा यस्तै समस्या छ । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको सम्भावना अहिलेसम्म कुनै दलमा देखिएको छैन । अरु दल र कांग्रेसमा के भिन्नता छ भने कांग्रेस जन्मजात प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले उसले लिने प्रजातान्त्रिक अभ्यास, नीति र रणनीति अरुका लागि पनि मार्गदर्शन बन्न पक्कै सक्छ ।
अहिले मुलुकमा वामपन्थी नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकारका कतिपय निर्णयहरु प्रजातान्त्रिक बिधिभन्दा बाहिरको छ भन्ने आरोप छ । सरकारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ विकास भएको छ । यसको कारण प्रतिपक्षी बलियो नहुनु हो । आजसम्म कांग्रेसले सरकारलाई ‘लाइन’मा ल्याउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । नेतृत्वमा रहेका नेताहरु कसरी भावी नेतृत्व हत्याउने र जोगाउने भन्ने खेलमा रुल्मुलिइरहेका छन् । यसले कांग्रेसको प्रभावकारिता दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा नेताको कमी छैन तर सही नेतृत्वको भने अभाव छ । कांग्रेस अहिले पनि समर्थकहरुको भरमा टिकेको छ । नेताको भर छैन । नेताहरुलाई पार्टीकोभन्दा आफ्नो र आफ्नो गुटको चिन्ता छ । अहिले केही युवा पुस्ताका नेताहरु जुर्मुराएर उठेको जस्तो देखिन्छ तर, उनीहरु पनि कुनै न कुनै गुटको शिकार नहोलान् भन्न सकिन्न । देउवा गुट, पौडेल गुट, सिटौला गुटले पार्टीलाई थिलथिलो बनाइरहेको छ । एकले अर्कोको आलोचनमाा समय खर्चेर मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाप्रति कांग्रेस बेखबर जस्तै छ । मुलुक संचालनमा कांग्रेसको भूमिका शून्य देखिएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल कमजोर हुने र कुनै दल चाहिनेभन्दा शक्तिशाली हुनु प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि राम्रो मानिंदैन । अहिले त्यस्तै भैरहेको छ । चुनावमा पार्टी किन हा¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने नेताहरुले एकले अर्कोलाई दोष दिइरहेका छन् । समस्या यहीबाट उत्पन्न हो । उम्मेदवार कांग्रेसको नभएर गुटको मात्र बन्न पुग्दा चाहिने जति सहयोग भएन । सरकारमा बसेर निर्वाचन गराएको कांग्रेसले यति लाजमर्दो नतिजा ल्याउने कल्पना कसैले पनि गरेका थिएनन् । तर आपसी सहयोग र गुटबन्दीका कारणा कांग्रेस थलाप¥यो ।
समय बितिसकेको छैन । अब नेतृत्व हस्तान्तरणको बेला आएको छ । देउवालाई अब किन सभापति बन्नु प¥यो । रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक जीवन पार्टी सभापति नहुँदा समाप्त हुने हैन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भैसकेका नेताहरुले पार्टीको सभापति र केन्द्रीय सदस्यका लागि मरिहत्ते गरेर गुटबन्दी सिर्जना गर्दा निम्तिएको संकटलाई चिर्ने दायित्व अब अर्को पुस्ताले लिनैपर्छ । त्यो पुस्तामा भएको क्षमता र लोकप्रियताको उपयोग उनीहरुले गर्नैपर्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शक्तिमा बस्ने एउटा निश्चित अवधि हुन्छ– कांग्रेसले पनि त्यो अबधि तोक्नुपर्छ । अझ एक फड्को अघि बढ्ने हो भने नेतृत्वका लागि उमेरहद तोके झन जाति । ७० कटेका नेताहरु अभिभावकका रुपमा पार्टीमा बसेर निस्वार्थ ढंगले नयाँ पुस्तालाई सघाउने दिशातिर लाग्ने हो भने कांग्रेसको अवस्था अबको चार वर्षमा अहिलेको नेकपाको जस्तो बन्दैन भन्न सकिन्न । यसका लागि त्याग चाहिन्छ । नेताहरुले त्याग नगर्दा नै नेपाल विग्रिएको हो । आफ्नो र पराई छुट्याएर व्यवहार गर्दा सिंगो देश असफलताको दलदलमा फस्दै गएको छ ।
सरकार असफल हुनु र सरकारले मनलाग्दी गर्नुमा उसको दम्भ जति जिम्मेवार छ प्रमुख पतिपक्षी दलको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सरकार निरन्तर संवादमा रहेर गलत र सही कुराको समीक्षा गर्न कांग्रेसलाई कसले रोक्यो ? सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकामा बोलेर वा लेखेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नेताहरु तयार हुनुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण पनि बुढो पुस्तामा हैन नयाँ पुस्तामा हुनुपर्छ, जोसंग क्षमता, दक्षता र कामगर्ने जाँगर छ ।
महासमिति बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलाई आगामी महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नेछ । के यसबीचमा पार्टीलाई शुद्धिकरण अभियानतर्फ नेताहरु एकढिक्का भएर लैजान्छन् कि गुटबन्दीमा केन्द्रित भएर नेतृत्व हत्याउने खेलमा लाग्छन् ? कांग्रेसको भविष्य यसैमा टिकेको छ । तीन नेता एउटै मालामा उनिएर मात्रै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता प्रकट हुँदैन । देखाउनका लागि जे गरे पनि हुन्छ ।